ဝမ်းရေးအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်နေရတဲ့အဘကို လှူဒါန်းချင်လို့ ရှာဖွေနေတဲ့ ယုန်လေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
ယုန်လေးကတော့ မျိုးဆက်သစ်ဂီတဝါသနာရှင်တွေကို လက်တွဲခေါ်ယူနေသလို ကိုဗစ်ကာလစတင်ကတည်းက ချို့တဲ့နေသူတွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက် ကူညီနေသူပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း သူကိုယ်တိုင် အရင်လိုပဲ ကူညီပေးသွားမယ့်အပြင် သူ Brand Ambassador အဖြစ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Rocker အချိုရည်ကလည်း ယုန်လေးရဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေအတွက် လစဉ်ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေကိုသာ ကူညီပေးလေ့ရှိတဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ အဘတစ်ယောက်ကို ထပ်မံကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဘရဲ့နေရပ်လိပ်စာကို အတိအကျပြောပြပေးဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ အကူညီတောင်းခံလာပါတယ်။ ” ဒီ အဘ နေရပ်လိပ်စာ အတိကျသိသူများ ညွန်ပေးပါခင်ဗျား . တွေ့ပြီး လိုအပ်တာကူချင်လို့ပါ …. ဒီ အရွယ်နဲ့ အပြင်ထွက်အလုပ်မလုပ်ရဘဲ ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးရမယ့် အလုပ်လေး စီစဉ်ပေးချင်လို့ပါ” လို့ပါဆိုပြီး အဘရဲ့ပုံရိပ်တချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အဘကတော့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အပြင် ကားတိုက်ခံရတာကြောင့် တင်ပဆုံရိုးနှစ်ဘက်စလုံးမှာ စတီးရိုးထည့်ထားရပြီး ချိုင်းထောက်နဲ့သွားလာနေရသူပါ။ လက်ရှိအချိန်အထိ တစ်လကို အိမ်ငှားခ တစ်သိန်းခွဲပေးကာ ငှားနေ နေရပြီး ဝမ်းရေးအတွက် သတင်းစာပို့ကာ အသက်ဆက်နေရသူပါတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ… အသက်အရွယ်နဲ့မမျှ ခက်ခဲပင်ပန်းနေရတဲ့အဘ ယုန်လေးရဲ့အကူအညီမြန်မြန်ရပြီး ဘဝရဲ့တတိယအရွယ်ကို အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။